IiNdumiso Chapter43 1 Lithethe ityala lam, Thixo, ubambane ngenxa yam nohlanga olungenanceba; Ndisindise endodeni ekhohlisayo, enobugqwetha. 2 Ngokuba unguThixo oyinqaba yam; undihlambelani na? Ndihambelani na ngezimnyama zokuzila, ngokuxina kotshaba? 3 Thuma ukukhanya kwakho nenyaniso yakho, zindikhaphe, Zindise entabeni yakho engcwele, Naseminqubeni yakho. 4 Ndoya ke esibingelelweni sikaThixo, KuThixo wovuyo lwam olugcobayo, Ndibulele kuwe ngohadi, Thixo onguThixo wam. 5 Kungani na ukuba usibekeke, mphefumlo wam? Kungani na ukuba ugule ngaphakathi kwam? Lindela kuThixo, ngokuba ndisaya kubuya ndibulele kuye, Olusindiso lobuso bam, noThixo wam. [ Prev ]